Miaraka amin'ny fampirantiana Expo 2020 miandry manakaiky ny zoro, ny tsenam-panangonam-bokatr'i Dubai dia marefo amin'ny fahafahan'ny mpampiasa vola. Tsy vitan'ny hoe afaka mifidy avy amin'ny karazam-pizaran'ireo karazan-trano izy ireo, avy amin'ny trano mahafinaritra mankany amin'ireo trano maoderina sy trano marevaka, fa koa mankafy ny taham-pahavitrihana avo indrindra amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao.
Noho ny fangatahana haingam-pandeha, misy antso tsy tapaka ho an'ny trano fonenana dia tsy fisiana, na ara-barotra, na ny toeram-ponenana manokana, ny lanitra no fetra raha ny mikasika ny safidy azo. Tsy maninona na kely na lehibe mpampiasa ianao, satria afaka manararaotra tanteraka ny tsenan'ny mpividy iray ianao, izay misy ny famoahana ny fiampangana amin'ny serivisy, ny fandoavam-bola DLD ho an'ny tetikasa tsy misy drafitra, ary ny drafitry ny fandoavam-bola hividianana zavatra.
Ny fanitsiana vao haingana momba ny fitsipika momba ny visa dia antony iray hafa amin'ny famoahana ny tsenan'ny tranom-barotra Dubai eo amin'ireo mpampiasa vola. Araka ny antontan-taratasy dia nanome vola an'arivony tapitrisa AED 56 ho an'ny tsenan'ny toeram-ponenana ao amin'ny faritra ao amin'ny 2017 ny mpampiasa vahiny, ary miaraka amin'ireo safidim-pifidianana vaovao, ity isa ity dia novinavina mba hahazoana fitomboana bebe kokoa.
Mba hanomezana fanazavana aminao, dia misy ny fanavaozana vao haingana mikasika ny rafitra visa ao Dubai izay hahazoana tombony be indrindra amin'ny tsenan'ny trano sy ny mpampiasa vola.
Ny visa 10-taona
Voalaza fa nanambara tao amin'ny fivorian'ny kabinetra vao haingana izay fa ny solontenan'ny mpampiasa sy ny sehatra toy ny injeniera sy ny dokotera, ary koa ny fianakaviany sy ireo miankina aminy, dia hahazo visa any amin'ny taona 10. Amin'ny ezaka enti-manintona ny talentany, manamafy ny asan'ireo mpiasa ao amin'ny firenena, ary manatsara ny toekarena, dia nanamboatra ny làlana ho an'ny mponina hanao fananganana trano izany. Izany koa dia manjopiaka mba hampitombo ny isan'ny mpantsakan-trano maharitra, izay mety hahasarika mpikaroka hitady asa tsy misy fetrany. Ireo izay manana fampiasam-bola kely indrindra amin'ny AED 10 tapitrisa ihany no afaka mendrika ho an'ity visa ity. Na izany aza, ny 40% amin'ny ankapobeny dia mety ho eo amin'ny tsenan'ny trano.
Raha toa ianao mikasa ny hampiasa vola iray mendrika mihoatra noho ny AED 5 tapitrisa, dia azonao atao ny mendrika hividianana visa dimy taona raha toa ka tsy novidina tamin'ny fananana na fampindramam-bola. Ankoatra izany, ny fampiasam-bola dia tokony ho voatazona mandritra ny taona 3 farafaharatsiny noho ny tompon'andraikitra voatanisa. Tahaka ny visa 10 taona, io visa io koa dia ahafahanao manohana ireo olona ao amin'ny fianakavianao sy ireo miankina aminao.
Ny Vondrona Fananana Visa roa taona
Ity dia navoakan'ny Sampan-draharaham-bahoakan'i Dubai (DLD) noho ny fampiasam-bola amin'ny trano iray any Emirày izay mandany mihoatra ny AED 1 tapitrisa. Manome anao tombotsoa ho lasa mponina any UAE izany ary mahazo tombony mifanentana toy ny fanohanan'ny fianakaviana, fahazoan-dàlana mitondra fiara, ary ID Emirates. Na izany aza, ny trano dia tsy afaka ny tsy misy drafitra, tsy tapaka, na ara-barotra ary tsy maintsy aseho ny porofon'ny fidiram-bola mihoatra ny AED 10,000 isam-bolana.
Araka ny Gulf News, ny lanjan'ilay safidy visa investisseur dia manomboka amin'ny AED 13,000 ka hatramin'ny AED 15,000. Na izany aza, manan-danja roa taona izy io, ka mahatonga azy ho safidy tsara. Tsara ihany koa ny manamarika fa tsy nahazo alalana enina enim-bolana ivelan'ny firenena ny tompon'ity visa ity.
Visa fampitam-baovao maromaro, avy amin'ny tompon'andraikitra misahana ny fifindra-monina, fa tsy avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Tany ao Dubai (DLD). Toy izany koa ny fananana visa fizahan-tany, nefa manolotra maromaro maromaro mandritra ny enim-bolana. Azonao atao ny mendrika hahazo an'io visa io amin'ny fividianana trano izay mendrika mihoatra noho ny AED 1 tapitrisa amin'ny iray amin'ireo emirates. Miankina amin'ny AED 2,300 sy ny AED 1,100 ho an'ny fanavaozana.
Ireto manaraka ireto ny fepetra takiana mialoha momba ny visa fanavaozana enim-bolana enim-bolana ary ny visa fananana fampindram-bola roa taona:
Fandefasana taratasy pasipaoro
Kitiho ny sata misy ankehitriny
Ny Lohatenin'ny Deed
Sary pasipaoro 6
Fanekena ny fitondran-tena tsara omen'ny Polisin'i Dubai
Previous PostPrevious Sheikh Hamdan nankasitraka ny drafitra hanodihana an'i Dubai uni ho faritra malalaka
Next PostManaraka Ny UAE no nankasitraka ny firenena safidy indrindra manerantany